Ego ole ka ọ na-eri iji wughachi igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Bike wughachi - otu esi edozi
Bike wughachi - otu esi edozi
Ego ole ka ọ na-eri iji wughachi igwe kwụ otu ebe?
Akwụ ụgwọ makaengine motowughachinwere ike site na $ 3,000-7,000. Naegoatụmatụ na njedebe dị ala nwere ike ọ gaghị enwe ike ịgụnyeegonke nnọchi akụkụ na-mkpa maka ọgba tum tum enginewughachi.Mar 2 2010
Ọ bụghị mgbe na ị na-kechioma na ihe pụrụ iche dị nnọọ nanị nghọta si n'akụkụ nke okporo ụzọ, ma m sụrụ ngọngọ n'elu a igwe kwụ otu ebe na ụzọ m na-arụ ọrụ a ọnwa ole na ole gara aga na na kpọmkwem ihe ịrịba ama na bụ n'ebe ahụ maka m owuwe ihe ubi ụgha. Ka anyị chee ya ihu, oleezi ihe pụrụ iche gbasara ya? Ọfọn, nke mbụ, ọ bụ igwe eji agagharị agagharị nke ị naghị ahụ nke ukwuu ụbọchị ndị a, anyị nwere tubị Reynolds, wiil Mavic, otu Suntour dị iche iche na nke kachasị mma n'ihe niile, ọ bụ n'efu. Taa, anyị na-ele anya n’etu esi weghachi igwe kwụ otu ebe nke gaara agarịrị ozugbo n’ihu.
Na ogbako! (jazz music) Nke mbụ, ka anyị lee anya na etiti na ndụdụ ahụ, n'ezie, na ha nọ n'ọnọdụ dị elu, ma ọ bụ, nke ọma, dị ka o kwere mee maka igwe kwụ otu ebe n'efu ma ọ bụ nwee ọkwa n'ihu ụlọ ahụ, biko were . Ugbu a na ihe niile dị njọ, belụsọ na ọ bụ igwe kwụ otu ebe dị ka Colnago Master Olympic nke ejiri nnukwu igwe mee, mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ gbawara ma ọ bụ gwepịa ma ọ bụ na-echi ọnụ n'ala mgbe ahụ ị nwere ike ịchọghị ego, oge, ma ọ bụ mbọ iji nweta ya weghachite belụsọ ma inwere ezigbo, amaghị m, ụdị mma ma ọ bụ ihe yiri ya. Yabụ kedu ihe anyị ga-enyocha? Ọ dị mma, jide n'aka na studs ma ọ bụ olulu mmiri dị n'usoro ka ha wee ghara ịgbawa ma ọ bụ gbapụ ma jide n'aka na ọkpọkọ ahụ dị mma ma gbaa gburugburu, ma ọ bụ n'ụdị ọ bụla ha kwesịrị ịdị, nke mere na ha bụ olulu ma ọ bụ dented, ma ọ bụ ndị yiri.
Ọ bụrụ na enwere akara nchara ọ bụla, jide n'aka na ọ naghị agafe tubing, obere nchara dị mma. n'ihi na anyị nwere ike tufuo nke ahụ, mana nnoo ị chọrọ ijide n'aka na kpuchie bụ ruo ọrụ nke na-ejide na-ebu gị ibu mgbe ị na-agba ịnyịnya. Ọ dị mma, otu ụdị ihe atụ dị iche iche nke ị nwere ike ime iji lelee etu esiri kwụzi ya bụ yana eriri di na nwunye iji hụ wiil ahụ na wiil ya.
Ya mere, na mpempe akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanye ya na tube isi, na-agafe tube tube dị ebe a, ọ na-aga n'akụkụ abụọ wee banye na ndị na-ahapụ gị ma ịchọrọ ka eriri a sie ike dị ka o kwere mee. Adịghị m mma na-ekekọta eriri, mana enwere m nke ọma maka mkpa m, mana gịnị ga-agwa anyị? Ọ ga-agwa anyị otu azụ igwe kwụ otu ebe kwụ n'ahịrị na n'ihu. So wopɛ sɛ wunya carbon anaa mfonini bi a ɛyɛ nwonwa? ihe aluminom eku ma na ọ bụ nke akara mgbe ọ bụ eleghị anya kasị mma na-pụọ na ya ugbu a n'ihi na a gaghị reattaching dị nnọọ ọnụ ala.
Agbanyeghị, ejiri igwe rụọ ụdị ụzọ dị iche iche esi ewepụta etiti ebe, mana ugbu a enwere m ntọala a, enwere m mmasị n'ezie ịchọpụta ma ọ dị n'ahịrị ma ọ bụ na ọ bụghị n'ihi na enyochabeghị m ya ebe ahụ wee nọrọ ebe m nwetara teepu nwere aka, aga m atụ etu eriri ahụ si dị anya n'ebe oche ahụ dị n'akụkụ ọ bụla, ọ bụ anụ ọhịa na ọkara, lee anya n'akụkụ ahụ, yana anụ ọhịa na ọkara, Enwere m obi ụtọ. N'ezie, ọ bụrụ na usoro a dị mma ma dịkwa mma, anyị kwesịrị ịlele ihe ndị ọzọ mejupụtara n'ihi na enweghị ha ị gaghị eme ihe ọ bụla ọsọ ọsọ ọ bụla, ị ga-? Yabụ ka anyị bido na wiil ndị a n'ihi na ha n'ozuzu ha bụ otu n'ime ihe kachasị ọnụ iji dochie anya ịma jijiji, yabụ ụfọdụ n'ime ha ekwesịghị ha, ha na-agbakwa ọfụma ma kwụ ọtọ ma tụọ ha ka ha kụrụ n'akụkụ akụkụ nke rim ahụ iji hụ. ha dị mma na ewepụghị na-eyi eyi nke nwekwara ike ịdị ize ndụ jide n'aka na ọ dịghị nke ndị spokes na-ehulata ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ na-adịgide adịgide na taya dị ka nke a bụ a dị nnọọ mkpa akụkụ nke igwe kwụ otu ebe. Ugbu a ị nwere ike ịhụ ozugbo ma ọ bụrụ na aka ahụ ehulata, n'ihi na ọfụma, ọ gafere n'ụdị, ka anyị kwuo eziokwu.
Ugbu a banyere taabụ taabụ, m ga-akwado iwepụ ya kpamkpam, yabụ ị nwere ike ịlele njikwa maka mmebi n'ihi na ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ na-agba ọsụsọ nke ukwuu ma ọ na-arụ ọrụ site na teepu aka na njikwa ahụ na oke nsonaazụ gụnyere imebi ndị na-edozi ahụ kwere na ya ma ọ bụ na ọ bụghị, yabụ gbaa mbọ hụ na ị gbaghị ihe a. Lelee ya nke ọma wee nye ya ihe dị ọcha iji wepu ihe fọdụrụ. Ọzọ, ka anyị lelee akụkụ abụọ kachasị nwee nsogbu na igwe ejiji igwe ochie dị ka nke a na site na nke ahụ m na-ekwu maka nkwado ala na isi.
Mbụ na cranks na-agbalị ịkwaga ha site n'akụkụ ruo n'akụkụ dị ka ị pụrụ ịhụ n'ebe a ọ dịkarịa ala ụfọdụ ukpụhọde ọrụ na mgbe ahụ na ekweisi n'ihu na ị chọrọ na-agbalị otu ihe na nkume na-atụ. Ọfọn, ụzọ kachasị mfe iji nwalee na ekweisi dị n'ala yana igwe kwụ otu ebe ebe a bụ itinye breeki abụọ ahụ. nke a bụ usoro p m ma gbalịa ịmegharị igwe kwụ otu ebe na azụ.
Ọ bụrụ na enwere mmegharị ọ bụla na mpaghara ekweisi ebe ị ga-eche, kwere m, mgbe ahụ ị ga-eme obere tweaking mgbe e mesịrị. Na-esote ịlele brekị ka ịdọpụ ndị levers ahụ gbaa mbọ hụ na ezigbo calipers ma ọ bụ cantilevers na-arụ ọrụ ha nke ọma n'okwu a, nke ha niile yiri ka ọ na-eme ọfụma. Mma mara mma na ụlọ akwụkwọ ochie abụghị ha? ndị a cantilevers, m na-amasị ha.
Ọzọkwa, lelee eriri maka akara ngosi ọ bụla nke njigide ma ọ bụ mgbawa ọ bụla dịka, ọ bụghị njedebe nke ụwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji dochie ha n'ihi na ha dị ọnụ ala ma anyị agafee usoro gia. Yabụ, na nke m, ọ dị mma ma dịkwa nfe na otu ụzọ ndị na-agbanwe tube. Enwere m ike ịhụ mechs ahụ nke ọma, nke ọma, ha yiri ka ha na-arụ ọrụ ha yana maka azụ, ka anyị lelee ratchet gears ka na-arụ ọrụ.
Oh, dị ka nrọ. Akụkụ ogo - ha na-ege ntị, ha anaghị ada mbà ma ọ bụ nke ahụ bụ okwu ochie na agbanyeghị. Ọ bụrụ na eriri gị ejirila ma ọ bụ gbatịa ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ, enwere ụzọ iji aka ya mee ya na nke ahụ bụ site na ịmụrụ aka, nke a dabara adaba maka ịghapụ azụ azụ azụ, jidere ya naanị pedal ma slide ya wee hụ na opupu ihe ubi na-eweghachi onye derailleur ahụ n'ọnọdụ ya.
N'ikpeazụ, lelee agbụ ahụ maka iyi. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere ngwa nyocha agbụ gị biko jiri ya. Ọ dabara nke ọma na nke a dị na njiri mara akwa na 0,5, yabụ ọ dị mma maka puku kilomita ole na ole karịa, echere m na mgbe steeti gachara, ọ dị ka ọ nwere ezigbo innings.
Ma, ka anyị nweta akụkụ egwuregwu ahụ, (egwu na-ada ụda) mana gịnị ga-elebara m anya na kpochapụla a site na iri asatọ? Unu niile dị mma. Enwere obere kink na rim, agbanyeghị, yabụ, aga m edozi ya ebe a site na ịpịpị okwu iji mee ka ọ dị ntakịrị, mana ọ dabara nke ọma na iko ndị a na cone dị mma na nke ahụ bụ ezigbo enyemaka, n'ihi na mgbe ụfọdụ ọrụ a nwere ike iwe obere oge karịa nkeji ise, n'ihi na iburu cone na cone, ikekwe ezigbo gbọmgbọm nke mkpokoro nke ime, nwekwara ike gbajie cone, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-abaghị uru. Ma enwere m obi ụtọ na igwe kwụ otu ebe a, enweghị m ike ikwere ya, mana m ga-eji ya tụgharịa ya.
Ugbu a, otu mpaghara nke chọrọ nyocha bụ na eriri derailleur. Lee ya anya, jọgburu onwe ya, ọ bụghị ya. Frayed, jọgburu onwe ya, naanị ya na-eti mkpu na gị, Achọrọ m ịkpọpu isi mkpịsị aka gị.
Mgbe nke a mere gị, ọ dị ka iguzo na plọg ma ọ bụ otu Lego, ọ na-afụ ụfụ nke ukwuu na maka ọnụ ahịa dollar ole na ole, euro ole na ole, pound ole na ole na-agbanwe ihe ntanetị niile dị n'ime ya. ga - enye gị ngbanwe kacha mma ma ọ bụ braking ọ ga - enwe nchebe karị, yabụ m ga - eme nke ahụ. Ugbu a, ewezuga ụgbọ oloko dị obere ma ọ bụ nke dị ize ndụ n'ime ụgbọ ahụ, ụgbọ oloko ndị ọzọ niile dị ezigbo mma nke m juru m anya, ha ga-anọru ọnwa ole na ole karịa, mana ugbu a aga m enye gị obere n'ọnụ na-agbalị breeki a bit ọzọ were were kwa, shifting Kwadobe na ọ bụ naanị oge m na-adụ ọdụ na-arụ ọrụ na a igwe kwụ otu ebe kpodoro isi ala, ma ọ bụ na-abụghị na a ziri ezi ọnọdụ. Ihe kpatara ya bụ na ị na-etinye mmanụ ole na ole nke mmanu gị, dị ka mmanụ agbụ, na eriri dị n'ime ma kwe ka ọ rụọ ọrụ n'ime eriri dị n'èzí, isi ike ndọda ga-arụ ọrụ ahụ ebe a maka gị, yabụ hapụ obere Soak na nkeji na ị kwesịrị ị na-eche ụfọdụ gentler braking, M hụrụ n'anya na-eji ire ụtọ braking na gia mgbanwe M fọrọ nke nta gọzie ịchọta a bike na ọtụtụ ihe bụ eziokwu na nke a ekweisi anaghị achọ ọ bụla anya.
A marala ụdị isi okwu ndị a ochie na-eme mkpọtụ, rụrụ arụ, jọgburu onwe ya, na-ama jijiji, ihe ọ bụla yiri ya, ma ọ bụ na elebaraghị ya anya. Na-eche ihe mere onye nwe nwe igwe kwụ otu ebe a na-enye ya naanị mgbe ọ dị mma ịkwụwa aka ọtọ. Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọtala otu n'ime ndị a ma ọ bụghị na ọ dị mma, n'ezie, buru ụzọ wepu ya na ntutu isi gị wee hụ n'ime agbụrụ ahụ ebe a, yabụ mgbe m kwuru inyocha, gbaa mbọ hụ na enweghị oghere n'ime ha. , ha anaghị emebi, ndị a bụ ihe ndị kachasị mkpa.
Ọ bụrụ otu a, agaghị m etinye nsogbu nke ịwụnye bearin ọhụrụ ma ọ bụ griiz ọhụrụ. Kama m ga - azụta ma wụnye ekweisi ọhụrụ n'ihi na ị chọghị itinye ihe a na - atụghị anya ya ma ọ bụ na - enyo enyo, ka emechara, ị ga - eji ịnyịnya ígwè gị dị mkpa, ọ bụghị ya. Ugbu a ọ bụ oge maka atụ ụjọ ala mgbodo, m na-ekwu na-atụ ụjọ n'ihi na nke ahụ bụ ihe m chọpụtara ozugbo m bulie igwe kwụ otu ebe, M nwere ike na-eche na cranks na-adịghị nnọọ zuru okè na-amasị m izu okè a igwe kwụ otu ebe otú ahụ ka m ' m ga-ewepu crank ahụ, aga m enyochakwa ihe mgbodo ala ahụ, ka m hụ ma enwere ụzọ ọ bụla iji mee ka ọ rụọ ọrụ ọzọ ma ọ bụghị ya, m ga-etinye ya na ngalaba ọhụrụ.
Ka anyị lee anya. Ugbu a bụ oge iji mee ihe nkwado ala ahụ na ngwa ụlọ akwụkwọ ochie. ọ bụ ezie na kwere m na ndị a bụ ọhụụ ọhụụ ma echere m na ha nwere ike ịbụ oge mbụ ejirila ha rụọ ọrụ na teknụzụ GCN n'ihi na anyị anaghị enwekarị igwe kwụ otu ebe na-abịa n'ụdị ala a, yabụ ka anyị nweta nke mbụ ahụ ihe circlip iji wepu ya ka anyi wee banye ihe ndi bu nkuku ukwu.
Ihe m ga - eme bụ naanị iwere egwuregwu ahụ ma nwee mmetụta ma ọ bụrụ na biarin ahụ siri ike ma ọ bụ dị mma. Ma eleghị anya, ọ dị nnọọ n'ihi na dịka ị pụrụ ịhụ mgbanaka mkpọchi bụ mega rụrụ, ya mere ọ na-eme m ka m chee na eleghi anya onye nwe ụlọ gara aga nọ n'etiti ọrụ ha ma hapụ naanị ya. Agbanyeghị, ka anyị hụ ka nzuzu ọ nwere ike, site na njiri mara ebe a, tụgharịa nke a, na-anwa ịkwụ ụgwọ ntakịrị ihe ahụ.
Ọ dị ezigbo mma n’ebe ahụ, mana nkwado aka ya, ọ nweghị ije na ọ dị mma ma dịkwa mma. Ya mere, anyị nọ n'udo, m ga-etinye ihe dị na ya na crank, anyị emechara nke ọma, mana echegbula onwe gị, enwere ụfọdụ ihe m ga-eji ya. Ugbu a ị na-echeghị na m nwere ike ịnweta igwe kwụ otu ebe a na-arụ ọrụ maka naanị kilogram ole na ole ejiri na eriri a, ka ị mere? Mba, n’ezie, aga m etinye taya ọzọ na igwe kwụ otu ebe n’ihi na ha agafela oge, ọ dị mma, achọrọ m nchedo mgba kacha mma ma ọ bụrụ na m gafere igwe kwụ otu ebe a.
Yabụ ntakịrị itinye ego na ya karịa ya. Ugbu a, ị ga-ekwenye na m na itinye taya ọhụrụ na igwe kwụ otu ebe a ga-eme ka m jide n'aka na njikwa m ga-adị mma karịa ka echedoro m pụọ na ntụpọ, yana ọ ga - adị mma mgbe m na - atụgharị, na - echetaghị taya ndị m wepụsịrị, n'eziokwu na - atụ egwu mgbe M dọpụrụ ha rim, ha gbawara ma isi ha ahapụghị ọtụtụ ihe n'echiche, ugbu a enwere ihe ikpeazụ m ga - eme ma kechie aka ahụ, mana m ga - enye gị nke anaghị eme ihe ọ bụla n'ihi na m ' m mara mma pụrụ iche mgbe ọ bịara ya, enwere isiokwu maka ya kama. Ugbu a obere ndụmọdụ, ọ bụrụ na ị na-aga ma hụ ihe ịrịba ama dị ka nke a, agala n'ihu.
Jigide, nara igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ nwere ike ịbụ oke mkpuru dịka m chọtara ya ebe a, enwere m ịtụnanya na nke ahụ, ime ihe n'eziokwu. Ugbu a chetakwa ime ka m mara ihe ị ga-enyocha igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ịchọta ya n'akụkụ okporo ụzọ, mee ka m mara na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a, dịka ọ na-adị mgbe niile, nye isiokwu a nnukwu mkpịsị aka ukwu ma kesaa ya ndị enyi gị. , ọkachasị ma ọ bụrụ n’otu n’ime ndị buddies gị chọtara nsị. Echefula ileta ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com ma lelee nnukwu edemede abụọ ọzọ ugbu a.
Jee nye ya nche.
Ọ bara uru iwughachi igwe kwụ otu ebe?
A ngalaba ụlọ ahịa mmaigwe kwụ otu ebeọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị mmammezintinye ego. Ọ bụrụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke eku ahụ emebi, ọ bụ oge maka ihe ọhụrụigwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na etiti ahụ gbagọrọ agbagọ, gbawara agbawa, gbajie agbaji, agbajiela welds, oche ma ọ bụ n'okpuru nkwado ya, oge eruola ka ọ lara ezumike nká.Mar 9 2019
Ọ dị ọnụ ala iji wuo igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ zụta igwe kwụ otu ebe?
Ọnụ. The ot amamihe kemgbe na ọ na-efu obere kazụtazuru ezuigwe kwụ otu ebe, atụlere yanaụlọotu site na etiti. Nke a bụ eziokwu maka ọtụtụ akụkụ. Na azụmahịa ndị dị na okpokolo agba na ihe ọkụkụ,ụlọelu eku mgbe ụfọdụ nwere ike ịbụdị ọnụ ala karịanhọrọ.Jenụwarị 24. Dec 2019
(egwu dị egwu) - Nnọọ ka ịjụ GMBN Tech, nke a bụ ihe ngosi 30th anyị nke mere na ọ dị mma. Ọ bụ ihe ngosi kwa izu ebe ị nwere ike izipu ajụjụ gị gbasara ihe igwe kwụ otu ebe. Na olile anya na anyị nwere ike inye gị azịza ziri ezi, Mụta ịghọta banyere ịnyịnya ígwè, iji nata ozi gị, zigara ha na adreesị ozi-e dị na ala nke ihuenyo ahụ ma ọ bụ tinye ha na nkọwa ndị dị n'okpuru.
Biko jiri #askGMBNtech mee ka ị nwee ike ime ka ịmata njirimara gị dị mfe. Yabụ, ịwụnye aka nri na Elias Sandell, bụ ọghọm nke iji asaa asaa, asatọ, itoolu, 10 na-agba ọsọ ọsọ na nke 11-ọsọ? Enwere m otu n'ime ihe eji eme ihe ma amaghị m ma m ga-enweta ya ka m jiri ya. Ihu ọma, ha dị ka Eliasthe yinye ngwaọrụ, mana agbụ bụ n'ezie dị iche iche.
Ihe mgbaba-ọsọ 12 dị warara karịa otu ọsọ ọsọ asaa. Ihu ọma ọ ga-eme ọtụtụ ihe. Ọ bụ na m ga-enwe mgbanwe.
Enweela ya n'etiti obere mgbatị ndị ahụ ma enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme karịa usoro ọsọ ọsọ asaa. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịgbaji, wekọtaghachi, ma ọ bụ chịkọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agbụ ọ bụla na ngwongwo ọ bụla, ịkwanye ntụtụ nwere ike ịbụ ntakịrị aghụghọ ma ọ bụrụ na ị na-eji ndakọrịta na-ezighi ezi na ihe eji agbụ n'ihi na ọ bụrụ na jaws adịghị edozi nke ọma Don 'ụgbọala ọzọ pen. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m debe ogige a ugbu a, aga m egosi gị ihe m bu n'uche.
Ọ bụrụ na m gbanwee, ị ga-ahụ ebe a na jaws na nke a bụ n'ezie ibughari, nke ahụ bụ n'ihi na ọ kwekọrọ na nha nha niile. Echere m, echere m na e nwere abụọ ma ọ bụ atọ na ọ bụ ekwekọghị na echere m na ha nwere ike bụrụ ihe Campagnolo n'ihi na ha dị ntakịrị. Ọ bụ ụlọ ọrụ Italiantali na-eme ka ihe dị ntakịrị.
Ma nke a dakọtara na agbụ ígwè 12 na-agba ọsọ azụ n'ụzọ niile, yabụ na ọ na-eme ka ọdịiche ahụ dị. Ugbu a, ọ dabere na agbụ nke ndị nrụpụta kachasị dịka Shimano, Park, Topeak, wdg.n'agha zuru oke, mana enwere oku mmụọ nke ọtụtụ emons na ahịa site na ndị ọzọ.
Ha bụ ihe na-enweghị isi banyere ihe ha na-ere bụ ọsọ asatọ, mana ị nwere ike ịchọpụta na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na 10 na 11. Ma ọ bụ ihe ị na-agaghị ama ruo mgbe ị ga-anwale ya ma hụ ma ọ bụ onwe- kwekọọ. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ọ kwekọọ ma ọ rụọ ọrụ, ụbọchị obi ụtọ! Nwere ike iji ya kewaa ya ma jikọta ya.
Buru n'uche na ọ dịkarịrị mfe ma nwekwaa nsogbu iji njikọ njikọta dị n'akụkụ ụbọchị ndị a. Ugbu a, ndị a nwere ike dabara ọtụtụ n'agbụ n'ahịa ma ọ dị mfe dịka ịkewaa agbụ ruo mgbe ị nwere nkwonkwo abụọ yiri nke ọma. Fanye ma weghachite isi njikọ.
Ọ bụ n'ụzọ bụ isi a n'ezie mfe ngwá ọrụ-obere usoro maka isonye a yinye. Ọ dịkwa oke nchebe, n'ihi na ka anyị kwuo na agbụ ahụ ị nwere ebe dị n'èzí ma ị nwere ebe dị n'ime yana ị nwere rollers n'etiti. Ugbu a, mgbe ị na-eji ngwa ọrụ olu a na-agbụ agbụ iji megharia usoro ahụ, debe agbụ ahụ na agba gị ebe a wee chụọ ntụtụ ahụ azụ.
Ma ntụtụ ahụ ga-abanye n'ụzọ niile n'ime efere nke abụọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ụzọ niile, nke ahụ bụ njikọ na-adịghị ike na agbụ ahụ. Ma ọ bụ oge tupu esemokwu amalite ma mebie agbụ gị. Ọ bụrụ na agbụ ahụ mebiri mgbe ị na-aga, ị nwere ike inwe ihu ọma.
Nwere ike ịnọdụ ala. Ọ na-amata ma ọ dịghị ihe na-eme, ọ bụ naanị mgbaka ahụ. Ọ bụrụ na agbụ gị mebiri mgbe ị na-ebugharị ibu ahụ, dị ka ịgbapụ site na ihe atụ, ị ga-agafere ogwe osisi na ọ ga-eme n'oge ọ bụla ị na-agaghị atụ anya ma ọ ga-abụ nke ka njọ.
caffeine ịgba ígwè
Naanị lezienụ anya. Jide n'aka gị yinye ngwá ọrụ na-kwekọọ na mgbe ahụ ị na-ọma-aga. Ihe na-esote bụ nhicha brọda Raymond Paculan Hey Doddy mara mma na-ekele gị Raymond Achọrọ m ịjụ ma m nwere ike iji kọntaktị na-ehicha ihe nhicha akwa breeki na rotors m chọkwara ịma nke ụlọ ọrụ omumu ị na-eji na mmezi gị isiokwu na-atụ anya ị zara ajụjụ ahụ .
Ee, n'ezie, yabụ na anyị nwere ndị na - ehicha breeki ebe a na ụfọdụ ndị na - ehicha kọntaktị ebe a. Ha yiri onwe ha ma ha nwere mmanya isopropyl. Ugbu a, kọntaktị Cleaner bụ eleghị anya, ihe kasị nta iwe nke ihe ndị a.
O nwere ike ọ gaghị ehichapụ ihe mkpuchi breeki gị yana ọkachamara nhicha ọpụrụiche nwere ọtụtụ ihe mgbaze. Mana o doro anya, uru nke onye na-ehicha kọntaktị bụ na ị nwere ike inweta ya ebe ọ bụla. Ọtụtụ ụdị na-eme ka onye na-ehichapụ kọntaktị ma ọ doro anya na ọ ga-adịrị gị mma iji ya na ihe eletriki dịka ọkụ ụgbọ ala gị mgbe ịnwere mmiri na ya, ma ọ bụ ụdị ụfọdụ? Onu ogugu.
O doro anya na ọ dị mma ka ị jiri ya na sekit. Ugbu a, ihe nhicha breeki, ọ bụ ezie na ọ nwere mmanya isopropyl, ọ na-adị ntakịrị karịa ma ọ bụ ezie na ejiri m n'aka na enwere ụfọdụ ngwaọrụ eletrọniki dakọtara, echeghị m ya, nke a bụ otu na echere m na ọtụtụ n'ime ha ga-adị ntakịrị ike iji ụfọdụ plastik siri ike dịka bọọdụ okirikiri. Na-aza ajụjụ gị, ee.
Nwere ike iji ndị na-ehicha kọntaktị. Breeki na-ehicha ihe ka mma, ma ọ bụ isi, mmanya a na-egbu egbu bụ ihe dị n'ime ha ma na-arụ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, dị njikere na ị na-eji akwa roba arụ ọrụ.
Wantchọrọ ụdị Nitrol glove n'ihi na ịchọghị ka ihe a banye aka gị ogologo oge n'ihi na ọ dị oke njọ. Ma ị chọghị mmanụ dị na akpụkpọ gị ka ọ gbanwee naanị na breeki breeki ndị a n'ihi na ha nwere ike imetọ ha. Dị ka omumuihe ogbako, a bụ ụfọdụ n'ime ya; enwere ọtụtụ dị iche iche na ahịa.
Ha niile bụ ụlọ ọrụ mara mma. Ndi otu akpọrọ Scotts mere nke a. Ga-ahụ nke a na garages na ebe obibi ọdịnala.
Nwere ike ịzụta ya na ebe ahia. Can nwere ike ịzụta ya na Amazon nke anyị na-eme. Mana enwere ụdị dị iche iche dị iche iche ebe ahụ.
Ọfọn ihe mere anyị ji enwe mmasị na nke a karịa ụfọdụ mpịakọta ndị ị na-enweta bụ n'ihi na mpịakọta ndị a buru ibu na-abụ obere akwụkwọ dị nro. Ọ naghị aga ebe ahụ ọ bụ ezie na inwetakwu, mana nke a, echere m na ndị Scotts, ha siri ezigbo ike. Ọ masịrị m karịsịa.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị m n'ihi na ọ dị mfe ijigharị. Ya mere, ka anyị pụọ. Ulo akwukwo ogbako Scott.
Ọ dị mma, na-esote Aịzik 232. Co nwere ike ịdọkọta aka mgbodo a na mpempe akwụkwọ nkwado dabara ka ị ga-agbago ihendị ala? Mba, echeghị m na ị ga - emeli ya. Site na eriri nkwado dị n'okpuru, ebe ndị ahụ na-adịkarị site na bọl.
Nọdụ n'èzí shei ahụ, isi ihe nke usoro nchịkọta akụkọ bụ na nrịgharị ahụ dị n'otu ọnọdụ ahụ. Ha bụ naanị na shei, nke ka ibu. Yabụ ị nwere ike ịnwale ịkpa ụyọkọ a, mana ọ nweghị ihe ga - eme ọ gwụla ma ị mebiri etiti gị.
Ekwenyesiri m ike na enwere ike ịnwe ụdị ụdị ụdị bodge, mana m agaghị akwado ya. M ga-arapara nnyonye anya dabara na ọ e mere na-dị nnọọ ijide n'aka na ị wụnye ya nke ọma na i nwere iyi free ịnya ụgbọ ala. Ọ dị mma, na-esote Eric Camacho.
Ndewo Doddy, ka imara na okwu ikpeazu m zuru ezuru igwe m. Ee, echetara m na m hụrụ aha gị ugbu a. Anọ m na-eche banyere iwu igwe kwụ otu ebe dị ka igwe kwụ otu ebe gị.
Ma gịnị ga-aka mma? Iwere otu jiri aka gị ma ọ bụ zụrụ igwe kwụ otu ebe ma kwalite oge na-aga? Aga m ewu otu, mana ọ dị m ka ọ na-ewe obere oge, obere oge na-ewe. Enwere m mmasị ịnụ echiche gị. Alright so based on the bike Building m na-eme kwa izu na tech show, bear cheta na nke a bụ naanị maka ihe ọma nke na-egosi, ị mara, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-ekesa.
Ọ bụrụ na nke a bụ igwe kwụ otu ebe m, agara m eme ya n'otu nnọkọ. Aga m agbago ihe na-agba ịnyịnya. N'ezie ọ ga-agbaji ọkara ugbu a.
Ya mere, m maara nke ọma were oge m, n'ihi na enwere ọtụtụ ihe dị n'azụ ya ma a ka nwere ihe jikọrọ ya na Fahrrad na usoro ndị ọzọ. Mana nke ahụ kwuru, n’onwe m, echere m na ịwu igwe gị bụ otu n’ime ihe ndị dị egwu. Echere m na onye ọ bụla na-agba ígwè, nwoke, ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ kwesịrị ime ya oge ụfọdụ.
Ikwesiri iwuru igwe kwụ otu ebe site na ncha n'ihi na ọ bụ ihe ọchị n'ezie. Ga-amụta ihe niile gbasara igwe kwụ otu ebe mgbe ị na-eme ya, ị ga-eritekwa uru ịhọrọ akụkụ ọ bụla ịchọrọ. Agbanyeghị, ị nwere ike ịmaghị akụkụ niile ịchọrọ.
Ma eleghị anya, ị ga - ejedebe naanị ide onwe gị ihe dị oke ọnụ ahịa nke ihe, ebe m chere na enwere ike ọ bụrụ na ikpe gị ọ nwere ike ịka mma ịga maka ụdị ejiji dị ka Komoso, Canyon ma ọ bụ otu n'ime ụdị ndị a. Ma ọ bụ ịnwere ike ịnweta ezigbo ezigbo ekike na fọkịkọ nwere otu nwere isi. Na oge ị na-agbazi gearbox ebe ahụ, enwere olile anya na ịchekwala ego n'otu oge, ịchekwala ego site na ịzụ igwe ahụ n'ụzọ ahụ.
Malite ịchekwa ntakịrị n'akụkụ na ka oge na-aga mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè ka anyị chee na ị na-eyi chainset gị mgbe ị gara ebe ụfọdụ iji kwalite ha na-esote. Ma mgbe ahụ, ka oge na-aga n’ikpeazụ ị nwere igwe kwụ otu ebe nwere ihe ndị ka mma. N'ụzọ doro anya, naanị ihe ịchọrọ ịgbakwunye ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke a bụ na etiti ahụ dị mkpa n'ihi na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ ịdebe yabụ gbaa mbọ hụ na etiti ahụ bụ ihe masịrị gị ma chọọ n'ezie.
Gbaa mbọ hụ na ọ bụ ihe ị nwere ike itolite. Yabụ ọ bụrụ na ị ka na-eto eto dịka ọmụmaatụ, gbaa mbọ hụ na enwere ohere ị ga-eji jiri igwe kwụ otu ebe too ma nwee ezigbo nkwa na ya. Ọ bụrụ na ịnweela ya ogologo oge, ịchọrọ ijide n'aka na ihe niile nwere ike kpuchie onye nrụpụta ma ọ bụrụ na nsogbu bilitere.
Ihe ozo ikwesiri itule bu ufodu ihe mejuputara n’ebe ahu. Ọ bụ kpam kpam adịghị mkpa. Nke ahụ ga-aka oge na-aga na ị nwere ike bulie ya ka mma stof.
Emela ohere ọ bụla. Nwere ike ichekwa na wiil ndị ahụ, ọbụlagodi ndị dị arọ, ma zụta wiil dị fechaa. Nke a abụghị nsogbu.
Taya, ha ga-akasị. Anyị nwere ike ịtọhapụ ha iji nweta taya nke ga-adaba na ịnya ụgbọ ala gị ma ọ bụrụ na ndụdụ nkwusioru na mmiri mmiri, ụfọdụ n'ime ndị na-emefu ego na-akwụ ụgwọ na bọọdụ ego iji mee ka ọnụahịa ha ghara ịdị na-eme ihe dị n'ime ha. nke mere na mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe gị, ị ga-enweta fọk ịka mma na ujo ị nwere ike imeli, nke ahụ pụtakwara na ị nwere ike ịgbanwe ndụdụ ahụ. Nwere ike ịtụ ihe dị ka usoro nke oge opupu ihe ubi e mesịrị.
Nwere ike ịgbanwe katrij cushioning na hoop ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ike ọzọ na ya mgbe ị mere. Naanị ihe ị ga-etolite dịka ị ga-eji etiti. Ọ bụrụ n’ị lekwasịrị anya n’inweta ndụdụ dị mma, ebe dị larịị, ezigbo okpokoro, ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime.
N'ime oge, ị ga-amụtakwu ihe ị na-echekwa Ully, ị nwere ihe ọ bụla ma debe anyị ihe ị zụrụ. Enwere m mmasị n'ezie. Ọ dị mma, nke ahụ dị ka ajụjụ ndepụta ịzụ ahịa.
Yabụ site na Bugboy 152000, Doddy, ị nwere ike inye aka? Enwere m ike ịchọta ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị iji wepu cranks mmetụta Raceface m maka nhicha zuru oke? Achọrọ m ịtọsasị Santa Cruz m kpamkpam tupu oge nchekwa oyi n'afọ a. Dịka m maara, cranks ndị a adịghị iche na ndị ọzọ. Ga-achọ 8 millimita hex spana iji kpochapụ crank ahụ site na igwe kwụ otu ebe.
Either ga-achọ Tork T25 ma ọ bụ 5mm Allen igodo wepụ, ma ọ bụ ududo ma ọ bụ ihe nkedo kpọmkwem, ejiri crank a mee ihe. Ga-achọ ngwá ọrụ BB, nke bụ otu n'ime ihe ndị ahụ, iji wepụ ihe nkwado ala site na igwe kwụ otu ebe. Nwere ike ịchọ hama naanị iji mee ka cranks ahụ ma ọ bụ axle ahụ maa jijiji.
Softer ọgwụgwụ ma ọ bụ a roba ọgwụgwụ bụ ezigbo echiche otú ị na-adịghị emebi axle e d abụba mgbe reassembling ihe. I gha acho threadlocker ma i mee nke a. You ga-achọ akwa nhicha ahụ na ụdị uwe aka iji chebe aka gị.
Ma mgbe ahụ ịchọrọ ike degreaser. Dị ka m ga-akwado, jigide ihe dịka iko ice cream ma ọ bụ ụdị plastik ọ bụla. Karịsịa plastik ojii a na-enweghị ike imegharị ka ị wee nwee ike iji ha maka ihe dịka nke ahụ dị mma maka ịnweta degreaser na ịrapara n'akụkụ ndị ahụ ma hichaa ha nke ọma.
Brọsh ịsa ezé ochie bụ ihe magburu onwe ya maka ịkpụ na iji nweta ihe nzuzu niile. Ma ka anyị gawa. Ọ bụ ya.
Enweghị ihe ọ bụla kachasị mma ịchọrọ. Naanị ezigbo ngwaọrụ ndị a ma na-eme ya. Ọ dị mma, nke ahụ dị mma.
Nke a sitere na Mainz Man. Gị dị ka m, ị na-eji nrugharị igwe, chetaara m ihe m rịọrọ maka chọrọ ịmara ọ na-atụ aro ka ịchekwa ọnya iyi ahụ na ntọala kachasị ala Nke a metụtara Park ATD? Echere m na ọ na-eme ma m na-etinye m na 4NM mgbe ejiri m, mana enweghị ike ịchọta ihe ọ bụla iji gosi na ịntanetị. Enwere m ike ịjụ Parks, n'ezie, mana echere m na ị nwere ike ịma.
Ahụbeghị m akwụkwọ ọbụla kwuru nke a. Echere m na ọ nwere ike ịdị iche na ATD, nke bụ otu n'ime obere ụmụ okorobịa ahụ. Ọ bụrụ na ị hụbeghị ihe ndị a na mbụ, enwere ntọala ntọala na mgbanaka dị na aka ebe a, nke ahụ bụ nke ochie, nke ahụ bụ ATD 1.
ihe-eri mgbe a ogologo igwe kwụ otu ebe
Echere m na e nwere ugbu a a 1.2 nwere ole na ole mmezi atụmatụ, magnetik bit njide ka ị na-eji Echefula gị ibe n'ibe. Ọ bụ ihe ọzọ na kpochapụla ratcheting.
Ọfọn, dị ka m maara, ọ dị mkpa ịtọgharịrị ihe ndị a na-eme mgbe ọ bụla, ma ọ bụghị efu. Echere m na ọ dị na ntọala kachasị dị ala ma ọ bụ n'ihi na ọ nwere akara n'ụzọ ọ na-arụ ọrụ n'ime, ugbu a rịba ama na ndị a dị obere, mgbe ị nwetara ntọala torque na nke a ka ha wee nwee ụdị pịa, mana ị nwere ike ịga n'ihu iji ya. Echere m na ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ị belata usoro dị n'ime nke a.
ATD dị iche iche naanị otu ha si arụ ọrụ. Nweghị ike ime nke ahụ. Nwere ike ghara ikesiike.
Ọ dịka nkwụsị pịa. Nwere ike karịrị ikesiike a na niile. Ekwenyesiri m ike na ndị a dị mma, mana enweghị m obi abụọ na ịhapụ ya na 4NM maka ugbu a bụ ezigbo echiche na ogbako a, amaara m na ndị a na-eji oge niile.
All na torque spana stof bụ ihe pụrụ iche na ndị enyi anyị na GCN na GCM n'ihi na ha nwere ọtụtụ carbon eriri, siri kokpiiti akụkụ na igwe kwụ otu ebe ka N'ezie ha nwere iji jide n'aka na ị na-adịghị n'elu ikesiike ha. N'akụkụ ihe ndị a na-arị elu, mụ onwe m na-eji ihe ndị a eme ọtụtụ ihe. Amaghị m otú ụmụ okorobịa ndị ọzọ si eme.
Mana anyị ji ha zuru oke, mana echeghị m na nchekwa anyị bụ nsogbu. Echere m na ọ bụ ihe nchekwa ogologo oge ka ị nwee ike imebi spana mgbaji ọdịnala. Mana m ga-ajụ Park, na n'eziokwu, echere m na anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche nke ga-eleta anyị site na Park n'afọ a.
Ya mere, aga m eme ka ị dị ọhụrụ na nke a n'ihi na echere m na anyị nwere ike iji Calvin mee ụfọdụ ihe dị mma. Ọ dị mma, eriri na-esote bụ maka gị Simy. Bikegbọ ịnyịnya ígwè m nwere obosara rimim 35 35 na gbakwunyere taya.
Enwere m ike iji taya 2.4 ka ọ dị m mkpa obere obere rim? Nwere ike iji taya 2.4, mana ọ bụghị ha niile.
Ya mere naanị maka Ihe Nlereanya n'oge gara aga, enwere m rim Ibis 7.41 nke bụ, echere m na ha bụ 40 ma ọ bụ 41 millimeters n'èzí, 35 n'ime, yabụ ha bụ n'ezie, nnukwu rim. Ejirila m 2.3, 235, 24, na 2.5s.
Nsogbu adịghị. Ma ọ bụghị taya niile na-arụ ọrụ. Ọfọn, taya na profaịlụ nwere akụkụ anọ, n'ozuzu, ọ bụrụ na ị tinye ya na oghere sara mbara karịa square.
Ihe ị ga-eme mgbe ị na-eme ihe ike bụ ihe dị mma. Otú ọ dị, ọ na-eme ka ha dị larịị n’elu. A, enwekwu esemokwu mgbe ị na-akwọ ụgbọala, na B na-eme mgbanwe dị oke egwu site na nke nzọ ụkwụ gaa n'akụkụ ndị a ma ama.
Ọ bụ 'nke ukwuu ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ na-eme na mgbe ahụ ị na-niile na nkuku nke pụtara na ọ nwere ike na-abịa anya mara mma mfe n'agbanyeghị eziokwu, ọ nwere a n'ezie ezi ubu na-akwado. N'ihi ya, ọ ga-adị iche dabere na taya ị na-eji na gị akpan akpan igwe kwụ otu ebe. Y’oburu na inwere igwe ike gwuru nkea, ndi a nwere ike buru otutu ihe dika nke ozo karia ime ihe ike site na iji ha n’elu uzo.
Ya mere, echere m na ị ga-agbalịrị ịnwale ma hụ, ime ihe n'eziokwu, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ na-ajụ ụdị taya gị ka ha hụ ihe ha mere. Mana ee ị nwere ike. Naanị na taya niile.
Na na na, onye ikpeazụ bụ a Cle Mans ipigide taya. Hey ụmụ okorobịa,% nke m n'ibu nkà si gị ọwa. Oh nwoke.
Nke a dị ezigbo mma. Ya mere, gị onwe gị na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe gị. Enwere m obi ịnụ nke ahụ.
Otú ọ dị, enwere m ajụjụ banyere ụgbọala m. Ana m agba ịnyịnya 1 x 11 Shimano XT. Edepụtala m gia m n’ụzọ ziri ezi na njedebe gị dị nkenke na ruo n’isi.
Anaghị ete ma ọ bụ ọkọ ruo mgbe m tinyere eriri m. Mgbe m nọ n'okporo ụzọ ahụ ma tinye ya na njigide ahụ, obere 3 ka 4 rụọ ọrụ anaghị arụ ọrụ nke ọma ma agbụ ahụ na-ehichapụ na cog ọzọ. Atụmatụ ọ bụla? N'ikwu eziokwu, anụtụbeghị m banyere ipigide na-emetụta ụzọ gia na-agbanwe karịa nke ị nwere ike ịnwe ntakịrị ike site na mpempe akwụkwọ mgbe ị na-agbanwe.
Akpa, achọpụtara m na ọ bụ ihe ọhụrụ nye gị ịhapụ njigide ma tinye ya naanị ka ọ gbadata. Onwe m, m ga - ahapụrụ ya oge niile. Nke ahụ na-enye m uru.
M ga-echekwa na e guzobere sekit gị n'ụzọ ziri ezi na nke mbụ ma ọ bụ na ị meela kposara elu na ala gị. Have nwere volta B gị nke bụ volta na-efegharị na azụ azụ ahụ, ma ị nweela ihe niile edoziri ebe ahụ na esemokwu USB ziri ezi, gbalịa ọzọ site na ịdebanye aka gị ma jidesie ya ike. Gbalịa otu ihe ahụ ọzọ na obere mgbatị ahụ ma wepụ njigide ma hụ ma ọ na-emetụta ihe m ji n'aka na ọ gaghị.
Mgbe ahụ ịmara ihe nsogbu ahụ bụ, mana ọ na-eju m anya na ọ ga-abụ nsogbu na mbu ịkwụwa aka ọtọ ma ọ ga-atụ m aro na njigide na-etinye mgbakasị ahụ na oghere dị ala, na ihe tọgbọrọ, yabụ ihe nwere ike ịbụ onye nwere onwe ya na derailleur, mana enwere ike ịnyịnya jockey ma ọ bụ wiilị na-eduzi, lelee ndị a. Ọbụna isi ihe nkwụnye aka ya nwere ike ịbụ onye nwere onwe ya. Mana enweghị m ike iche n'echiche na ọ ga-emetụta nnweta gị n'ezie yabụ echere m na ọ dị mkpa tufuo nke a ma gbalịa ịchọta ya.
Ka anyị mara, Cle, n'ihi na nke a bụ ihe iju. Anụtụbeghị m nke ahụ mbụ. Ọ dị mma otú njedebe nke ajụjụ ọzọ bụ GMBN Tech.
Enwere m olile anya na m zara ụfọdụ n'ime ajụjụ gị. Nweta nke gị na nkọwa ndị dị n'okpuru ma gbaa ha ọkụ na adreesị ozi-e nke dị na ihuenyo na mmalite. N'ihi na ihe ole na ole jụụ isiokwu, pịa ebe a ka anyị pịa dabara BB mmezi isiokwu.
Ọbụghị naanị na nke a dabara maka pịa, mana enwere m olile anya na ọ ga - ekpochapụ iyi niile na akwa ụta. Mana m na-eji mpempe akwụkwọ dị ka exa biko na isiokwu a wee pịa ebe a iji hụ Evolution of Maevic Hubs. Ọ bụ obere akụkọ na echere m na ọ mara ezigbo mma ma nwee ọtụtụ ozi na ya, ndị enyi na-anaghị akwụ ụgwọ, denye aha, ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị ịjụ ajụjụ gbasara teknụzụ, nye anyị mkpịsị aka.
Ọ dị ọnụ ala karịa iji wughachi ma ọ bụ dochie igwe?
O yikarịrị ka nke ahụiwughari enginenwere ike ịchekwa gị ego ma e jiri ya tụnyerennọchi njindabere nanjinnsogbu ị na-eche ihu na ọnụahịa nke akụkụ dị mkpa makammezi. Dabere na ọnọdụ ahụ,iwughachinke ginjinnwere ike ichekwa gi ihe ruru ọkara nke ihe ị ga-emefudochienke ginjin.
Gbanwee injin gị, Jesus Federn kwuru sị Scotty Achọrọ m ịtụgharị nnyefe Asix 4.0 na Jeep Cherokee m, Achọrọ m iji akwụkwọ ntuziaka dochie ụzọ ụkwụ anọ ahụ, kedu ihe ị kwadoro na Denver Colorado iji zipu mgbochi ahụ ịmụ nwa na ịzụta nnyefe agafe, ee, ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta gearbox m ga-eme nke ahụ mana ngọngọ ahụ, anaghị m adụ ọdụ na-anwa ịnwa nwoke ga-egwupu ebe ahụ, onye ọzọ ịchọrọ, ọ kaara gị mma engine nke ahụ bụ otu o si arụ ọrụ, nke ọma, ha bụ ndị ama ama na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịmụrụ ha maka iji ụzọ. Enwere ọtụtụ ebe ebe ị nwere ike ịzụta ezigbo mma, injin agbazigharị, m ga-apụ ma hapụ ha ka ha mee ihe niile wee tinye ya n'ihi na ị chọghị ịgwakọta ya, afọ ndị m A hụla ọtụtụ ndị mmadụ nwere nnukwu nsogbu na ụgbọ ala ha n'ihi na, nke ọma, otu nwoke mere ngọngọ ahụ, onye ọzọ mere isi ya, onye ọzọ tinye ya na onye ọ bụla na-anwa ịba onye nke ọzọ anya ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ha chọrọ ịdị mma dị elu Engine ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ya ọ bụghị ihe niile a bụ otu ebe, Jose na-ekwu ụtụtụ ọma Mr.
Kilmer M nọ na-eche banyere Chevy SSR, ebee ka ị nọ? ezigbo gwongworo, mba, enwere m olile anya na ị zụtabeghị otu, enwere m ndị ahịa na-azụ ha, naanị isi ọwụwa ha nwere ụfọdụ n'ime ha gbalịrị ịgba GM n'okpuru iwu Lemon iji nwetaghachi ego ha, otu n'ime ha mere n'ezie ndị ọzọ ha enwetaghị mmeri mgbe ha na ndị na-ekwurịta okwu nwere okwu n'ihi na ọtụtụ oge na ndị na-eme mkparịta ụka na-ahọ ndị ọrụ mgbasa ozi GM n'ezie na ha ga-anọ n'akụkụ onye ha ga-anọ, ị maara, ọ bụghị eziokwu ugbu a, na mbụ ọ bụ na, ma ọ bụghị àgwà ọzọ, ihe ndị a enweghị naanị mma, ma ọ bụrụ na ị nwere ka ha lekọta ya, nwoke ahụ bịakwutere m ụbọchị ọzọ wee sị, nke ọma, gịnị ka m ga-eji Scotty , m kwuru na o nweghi ihe ị nwetara? n'ihi na ọ bụrụ na ị ree ya ma ọ rụọ ọrụ nke ọma ugbu a, hapụ m ka m chere gị ma ọ bụrụ na ihe buru ibu gbagoo, m ga-agwa gị tufuo ya ugbu a ma ọ bụ naanị na-anya ụgbọ ala ruo mgbe wiil ahụ ga-ada, nke ahụ anaghị arụ ọrụ niile ma tụfuo ihe ahụ, ị ​​rapaara ọ bụghị nnukwu ego ma ọ bụrụ na ị nwere otu, lekọta ya, ị gaghị ama oge ole ihe ga-adịru ma ọ bụrụ na a kwụrụ ụgwọ maka ihe ọkụ mmụọ na-ebugharị, ma ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọ bụla maka ya, ọ bụ echiche m na ụgbọ ala ọ bụla, Michael Blackwell na-agwa Scotty, ana m eche ịzụta Honda Element maka $ 5,000 na 150,000 kilomita, ọ bụrụ na m ga-enweta akpaka ma ọ bụ mkpisi ahụ, ị ​​chọrọ n'ezie osisi, akpaka bụ ụdị adịghị ike na ihe ndị ahụ, osisi ndị ahụ na-eti mkpu Enwere m ndị ahịa nwere ihe nwere ngwa ngwa ise na-agba ọsọ na-ere roba na akụkụ anọ niile, ihe ndị ahụ adịghị mma, ha anaghị atụ nke ukwuu, yana a gearbox ọkọlọtọ, ọ bụ a otutu ihe fun na-ekiri na-ege ntị, i nwere mma gas agbara na ọ gaghị agbaji dị ka honda automat ic gearbox, honda malitere dika igwe ugboala, ha nile nwere gearboxes di iche iche ewezuga 750 honda ha wuru na akpaka nke bu ihe nkpuchi, na ha enweghi ike ire, o nweghi onye choro izuta ya. jọgburu onwe ya, n'ihi ya, ọkọlọtọ ha anaghị agbachitere, zụta ọkọlọtọ, azụtaghị akpaka ma mgbe ahụ ihe nwere ike ime gburugburu, mana ọ bụrụ na ọ nwetara narị kilomita na iri ise na ya, m ga-anwale ihe na-akwụ ụgwọ ihe na-erughị ise maka Eric Scotty kwuru, ọ bụ nnukwu ego maka ụdị agbara a, ka ọ dị ụtụtụ, kedụ ihe ị chere gbasara igbe nchekwa Ford Focus 2003 nke dị narị puku kilomita na iri atọ na asatọ, Focus bụ ala ụgbọ ala mana isi nsogbu ha nwere bụ nnyefe ha na-akpaghị aka, ha nwere ụfọdụ nkwekọrịta nke ụfọdụ n'ime ha na-emegide ha, nke ahụ bụ gearbox ọkọlọtọ, ụgbọ ala a kụrụ ọtụtụ, enwere m ndị ahịa na-elekwasị anya na igbe gearbox ndị nwere 250,000 kilomita ma ha ka ru nning s Trong, yabụ na ọ dịghị njọ, ọ nwere ike iwe ogologo oge, mana ọ bụrụ na ha na-ekwu maka ịzụrụ nke ọ bụ 03 nwere kilomita 138,000, ị naghị akwụ ụgwọ ihe ahụ maka ya maka na ire ere ahụ adịghị elu, ị nọ ị gaghị enweta nkwa ọ bụla ka ị mara na ị na-eji ego gị egwu egwu mana ị naghị akwụ ụgwọ ihe ahụ maka ịnweta ya ntakịrị ọnụ ala, ị nweta ego gị, ị na-akwụkarị obere ụgwọ maka ụgbọ ala toro eto nwere agbara dị elu karịa, ọ nwere ike ịbụ ezigbo ụgbọ ala maka na ọ bụ ọkọlọtọ, mana akwụla ụgwọ nke ukwuu, akwụla ụgwọ nke ukwuu, Bernice kwuru na enwere m igwe 1.9 TDI nke na-ere ọtụtụ mmanụ, lita 1 kwa kilomita 500 ọ bụla, ọ nwere ike bụrụ turbo? Ee ọ nwere ike ịbụ turbo nke turbo ahụ na-afụ gara aga, rịba ama na turbo na ihe a bụkwa mmanụ dị jụụ na mmanụ a na-ete mmanụ dị ka njin ahụ, ọ na-eji otu mmanụ enye na mgbe akàrà amalite ịga ọ ga-afụfụ na ya nwere ike gị? Kwue si n'usoro ikuku nke sitere na turbo banye na engine ebe ọ na-amị ikuku, ọ bụrụ na ihe niile kpuchiri mmanụ n'ime ya, ọ bụ turbo n'ihi na ọ ga-abụ kpamkpam nkụ mgbe ọ nwere mmanụ, turbo gị ọ dị njọ, lee ya anya, ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ ọ bụ injin gị nke na-ere mmanụ ọkụ, m na-eche na ọ bụ turbo n'ihi na ọtụtụ n'ime ha na-eme nke ahụ ka ha na-etolite, mgbe ha mere nke ahụ na Volkswagen, njikwa mma ha abụghịzi ihe ọ bụ a na-ekwuru ihe kachasị, nke bụ nnukwu ihe kpatara m ji agwa ndị mmadụ hoo haa ka ha ghara ịzụta Volkswagen ọzọ na United States Achọghị m ịhapụ ihe ọ bụla ụgbọ ala m na-arụzi ọzọ, chee na ị ga-agbanye mgbịrịgba ahụ!
Ego ole ka ọ na-eri iji wughachi ọrịa strok 250 4?
Dabere na akụkụ ndị dị mkpa iji dochie ya na ma ị na-arụ ọrụ ahụ n'onwe gị, a4 ọrịa stroknjinwughachinwere ikeegoebe ọ bụla si $ 50-3000 + maka akụkụ na ọrụ. Typicaldị4 ọrịa strokunyi bike n'elu-ọgwụgwụwughachina a ọhụrụ pistin, valves na oge yinye uche n'ozuzuegobanyere $ 300-700 na akụkụ.
Nwere ike iweghachi igwe igwe nchara nchara?
Ị nwere ikejiri ma JenoliteNcharaRemover ma ọ bụ JenoliteNcharaIhe ntụgharị kaweghachinke giigwe kwụ otu ebe, dabere na otunke ncharaọ bụ. Otu ugboroị nwere ikeleeajariewepuwo ya na igwe, kpochapu ya ka ekpughere elu igwe nke di njikere ka ese ya!
O gwụla ma etiti a bara uru nke ukwuu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 'kwesịrịọ 'ịzụta ihe ndị ọzọ kachasị mkpa, dịka wiilị azụ ọhụrụ (na ụyọkọ, et al). Uzo ohuru ohuru, ozugbo inwetara ihe nkpuchi gi na ike ogwugwu na ya, ga-efu ihe kariri $ 100, ma nwee ike igba 200-300 ma oburu na i kpebisiri ike ichota uzo.16.01.2018
Enwere m ike itinye igwe kwụ otu ebe n’onwe m?
Enwere akụkụ nkeigwenke ịnwere ikeihu ọmatinyeya n’onwe gị dị ka azuokokoosisi post na oche, ahụ, n’iru wheel na ndụdụ. Nke mbu, i ghaghi inweigwe kwụ otu ebengwá ọrụ pụrụ iche, ngwá ọrụ ọnyàgaOlee ihe enyemaka na-arụ ọrụ ma na e nwere nnukwu Ohere nke etisa gịigweakụkụ.
Ndi Rebuilt engines dị ka nke ọhụrụ?
Ndị aremanufactured enginesna-etida na obere ụlọ ọrụ, ebe arụnyere a dum nke crankshaft biarin, pistin yiri mgbaaka, akàrà na gaskets, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na emechara nke ọma, aremanufactured enginekwesiri ịdị kaezinwee aigwe ohuruọ kwesịrị ibu akwụkwọ ikike ruo otu afọ.
Ugboro ole ka enwere ike wughachi injin.
Ugboro ole nwere ikeụgbọ alanjin1500 CC ga-ekpuchikwa? - Quora. E nweghị ịgba na ọnụ ọgụgụ nkeogeiheengine nwere ikeịbụwughachi.